DHAGEYSO:Midowga musharraxiinta Soomaaliya oo shir uu Muqdisho uga socda | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Midowga musharraxiinta Soomaaliya oo shir uu Muqdisho uga socda
DHAGEYSO:Midowga musharraxiinta Soomaaliya oo shir uu Muqdisho uga socda
Waxaa uu shir uga socdaa Hoteel ku yaal Magaalada Muqdisho Xubnaha Midowga Musharixiinta, Guddoomiyaha Aqalka Sare, Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Jubbaland ee ku mideysan yihiin Madasha Badbaado Qaran loogu magac daray.
Shirkaan ayaa waxay uga hadlayaa muddo kordhinta ay golaha Shacabka ee Baarlamaanka shalay u ansxixiyeen hay’adaha kala duwan ee dowladda Federaalka Soomaaliya iyo sida laga yeelayo maadaama dhowr jeer ay ka digeen muddo kordhinta.
Xubnaha Midowga Musharixiinta & Madasha badbaado Qaran ayaa waxa la filayaa in kulankooda ay kasoo saaraan Warmurtiyeed looga hadlayo xaalad dalka iyo tallaabada ay qaadanaan.
Wararka la helayo ayaa waxaay sheegayaan in Madaxweynayaasha Maamulada Puntland iyo Jubbaland la filayo inay dib ugu laabtan degaannadooda, iyagoo Muqdisho u joogay shirkii aan wax natiijo ah kasoo bixin ee Madaxda dowlada & Maamul Goboleedyada ku yeesheen Teendhada Afisiyooni.
Dhanka kale qaar ka mid odayaasha dhaqanka Soomaaliya ayaa Madaxweynaha Soomaaliya iyo Gudoomiyaha Golaha shacabka ku eedeeyay inay dalka fowdo Galinayaan.
Previous articleXildhibaanka deegaanka Koonfurta Gatundu Moses Kuria oo 75,000 lagu ganaaxay
Next articleDHAGEYSO:Shir ku saabsan la dagaalanka isticmaalka maandooriyaha oo lagu qabtay Mandera